साउन २४, २०७८ आइतबार ३०७२२ पटक हेरिएको
जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस । . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो । फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस ।
किनकि मृ त्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो ला”स होइन । ला’स त त्यो हो , तपाईं जि’उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ ।जिन्दगी थोरै छ , हरेक पल म खुशी छु . काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन , हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु !
यो पनि पढ्नुस् : तराईको दलित परिवारका दाजु र बहिनीले एकै शैक्षिक सत्रमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्नका लागि सरकारी पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएका छन् । मेडिकल साइन्स अन्तर्गत एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि आइ ओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा दाजुबहिनीले नै नाम निकालेका हुन् । महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ गोरिगम्मा गाउँका जीतेन्द्र पासवानका छोरा र छोरीले नाम निकाल्न सफल भएका छन्। जीतेन्द्रका छोरा अभयकुमार र छोरी कृतिकाले पूर्ण छात्र वृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएका हुन् ।
दाइ अभयले दोस्रो पटकको प्रयत्नमा नाम निकालेको भएपनि बहिनी कृतिकाले त पहिलोपटको परीक्षामै नाम निकाल्न सफल भएकी छन्। अभयले १४५ स्कोर ल्याएर मधेशी दलित कोटातर्फको आरक्षण समूहमा पहिलो स्थान ल्याउन सफल भएका छन् भने उनको बहिनी कृतिकाले १२२ स्कोर ल्याएर मधेशी दलित महिलातर्फ चौथो स्थान र समग्र दलित कोटातर्फ सातौँ स्थानमा नाम निकाल्न सफल भएकी छन्। दुवै दाजुबहिनीले महोत्तरीको मनरा सिसवा गाउँ पालिकाको सरकारी स्कूल सहस्राम माविबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
अभयले २०७२ सालमा एसईई ‘बी प्लस’ ग्रेडमा उत्तीर्ण गरेका थिए भने बहिनी कृतिकाले २०७४ सालमा सोही विद्यालय बाट ‘ए’ ग्रेड ल्याएर एसईई उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । अभयले त्यसपछि काठमाडौंको गोल्डेन गेट कलेजबाट टेन प्लस टु २०७५ सालमा उत्तीर्ण गरेका थिए । उनले प्लस टुमा ‘बी’ ग्रेड ल्याएका थिए। त्यसैगरी कृतिका पनि २०७७ मा सोही कलेजबाट ‘ए’ ग्रेड ल्याएर प्लस टू उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। अभयले पहिलो पटक जाँच दिँदा पनि दलित कोटामा नाम निस्किएको थियो तर त्यति बेला बिन समुदायलाई पनि दलित कोटामा राखिएको हुनाले उनको नाम पर्न नसकेको अभयका बुवा जीतेन्द्र पासवान बताउँछन् ।
तर अहिले बिन जातिलाई द’लित समुदायबाट हटाइएको उनले बताए । ‘अहिले जसरी बिन जातिलाई दलित समुदायको कोटाबाट हटाइएको छ त्यस आधारमा गत वर्ष नै मेरो छोरा अभयले एमबीबीएस पढ्न पाउँथ्यो,’ जीतेन्द्रले भने, ‘खैर, एक वर्ष थप मेहनत गरेर यो पटक ब्याजसहित छोराको साथमा छोरीले पनि नाम निकालेर हाम्रो सपना साकार पारेका छन् ।’ विस्तृतमा लोकान्तरमा खबर छ ।